guriga Energy-ool ah
Nidaamka ECO NIDAAMKA
Magaalada & Guriga Umadda
Raadi kambabka guriga hadda!
Guriga prefabricated CONCEPT-M 159 Vilbel Bad
Ku noolaanshaha 127
Villa ee style Bauhaus
Guryo casri ah oo prefabricated leh oo daaqad leh iyo saqafka sare
Guryaha cusub ee casriga ah ee loo yaqaan 'carport', daaqada daaqada iyo guryaha saqafka leh waa guri qoys oo shaqsiyadeed ka socda shirkad guryaha ka sii horeeyey WeberHaus. Qiyaastii 190 mitir murabac
Nasashada waddanka villa casriga ah ee qaabka Ingiriisiga
Hoyga raaxada ee prefab ee ingiriisiga qaabkiisa guryaha ayaa ah guri si gaar ah loo qorsheeyay oo leh naqshad saqafka jilicsan iyo laba garaash oo laga helo bixiyaha WeberHaus, Iyadoo agagaarka 640
Guryaha casriga ah ee San Pedro oo leh saqaf ballaadhan
Dhismaha casriga ah ee Kubus Haus San Pedro oo leh naqshad saqafka saqafka sare ah iyo wejiga cad-cad ee qaab dhismeedka Bauhaus waa guri warshadeysan oo horay loo sii isticmaali karo oo ka yimid GUSSEK HAUS. Barxadda
Guryaha casriga ah ee magaalada Melina oo leh saqafka sare iyo baloogyada
Guryaha cusub ee casriga ah ee loo yaqaan 'Melina villa' oo leh jiifa saqafka dusha sare leh iyo alwaax alwaax qurux badan ayaa ah aqal casri ah oo laga soo dejiyay shirkada GUSSEK HAUS. Guriga laba jibaaran ee qorshaysan
Bungalow Piedmont casri ah oo leh saqafka sare & garaashka
Guryaha raaxada leh ee Bungalow Piemont oo leh garaash iyo naqshad saqafka saqafka sare ah oo ah qaab dhismeedka Bauhaus waa GUSSEK GUR si gaar ah loo qorsheeyay. Qorshaha dabaqa ballaadhan ee dhul ballaaran waa heer dhulka ah
Guryaha casriga ah ee Bag Bag oo leh saqafka sare
Guryaha casriga ah ee cusub ee loo yaqaan 'Baggio' cusub ee casriga ah oo leh qaab dhismeedka saqafka sare leh, garaashka iyo xargaha korniinka wejiga ayaa ah guri ballaadhan oo magaalada ka imanaya soo saaraha guryaha loo yaqaan 'GUSSEK HAUS'. Guriga laba jibbaaran ee laba jibbaaran
Ku soo ururi guri hal qoys ah BALANCE 146 oo leh saqaf alwaax leh
Guriga saqafka casriga ah ee loo yaqaan 'BALANCE 146' oo laga soo saarey soo saaraha guryaha loo yaqaan 'Bien-Zenker' wuxuu ku habboon yahay dhulalka dhuuban. Qorshaha dabaqa qoysku wuxuu leeyahay 5 qol iyo hareeraheeda
Guryo si gaar ah u faahfaahsan oo leh saqafka sare ee qaabka 'Bauhaus'
Guri-reerka casriga ah oo casri ah oo leh qaab dhismeedka saqafka sare ah oo ah qaabka loo yaqaan 'Bauhaus style' WeberHaus. Qorshaha dabaqa ballaadhan ee guryuhu wuxuu leeyahay 6
guriga Apartment (3)
guriga Laba qoyska (50)
qorid / Afeef / Privacy